HomeWararka CaalamkaDagaalka Ruushka ee Ukraine 20 May: Ruushka oo dhulka la simay Gobolka Donbas
May 20, 2022 Wararka Caalamka, Wararka Maanta, Warka ugu akhriska badan 0
Ku soo Dhawaada qaar ka mid ah dhacdooyinka ugu muhiimsan ee la xidhiidha dagaalka Ukraine Jimco 20 May.
* Gobolka Donbas ee ku yaal bariga Ukraine ayaa “gebi ahaanba la burburiyey” ka dib bilo ay duqeymo ka socdeen, sida uu sheegay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyj Khamiistii.
Waxaa jira “weeraro joogto ah oo lagu hayo gobolka Odesa, magaalooyinka bartamaha Ukraine, Donbas ayaa si buuxda loo burburiyey,” Zelenskyj ayaa ku sheegay khudbadiisa maalinlaha ah ee muuqaalka, sida uu qoray CNN.
– Donbas, dadka deegaanka ayaa isku dayaya inay kordhiyaan cadaadiska. Waa cadaab, mana aha buunbuunin buu yidhi.
– Tani waa isku day ula kac ah oo dambi ah oo lagu dilay dad badan oo Yukreeniyaaayaa la sii sheegay.
* Aqlabiyadda 86 cod ee 11, Senate-ka Mareykanka ayaa u codeeyay xirmo cusub oo gargaar ah oo ku dhow 40 bilyan oo doolar, 386 bilyan oo koron, oo la siinayo Ukraine.
Madaxweyne Joe Biden ayaa la filayaa inuu dhawaan saxiixo in xirmada gargaarka la diri doono.
Xirmadu waxay ka kooban tahay labadaba gargaar milatari, mid maaliyadeed iyo mid bini’aadantinimo. Waxyaalaha kale, lix bilyan oo dollar ayaa loo qoondeeyay in lagu soo gato baabuurta gaashaaman iyo nidaamka difaaca hawada, halka ku dhawaad ​​sagaal bilyan ay ku baxayso xoojinta nidaamka siyaasadda.
* The New York Times waxa ay heshay muuqaalo muujinaya sida askarta Ruushka ay u soo ururiyeen oo ay u toogteen koox rag ah oo Ukrain ah gudaha Butsja bishii Maarso. Avisa waxa ay qortay in saddexda fiidyow ay si toos ah u muujinayaan waxa ay u badan tahay dembi dagaal. Ugu yaraan siddeed nin ayaa la dilay.
Xukunka dilka ayaa ka dhacay saldhig ku meel gaar ah oo Ruushka uu ku leeyahay xaafadda Kyiv ee magaalada Butsja 4-ti Maarso. Ciidamada Ruushka ayaa magaalada qabsaday ku dhawaad ​​hal bil ka hor inta aysan isaga bixin dhamaadkii bishii March, waxaana dilalka uu wargeysku sheegay inuu diiwaan geliyay ay ka mid yihiin tiro xukuno ah oo ka dhacay magaalada Butsja.
* In ka badan 1,000 baabuur oo Yukreeniyaan ah ayaa laga hor istaagay inay galaan dhulka ay Ukraine maamusho ee Zaporizhia, sida uu sheegay hoggaanka militariga ee gobolka.
Magaalada Vasylivka, maalintii afaraad oo xiriir ah, dadka qabsaday waxay u diideen in ka badan 1,000 baabuur inay galaan dhulka ay maamusho Ukraine, ayaa lagu yiri qoraal la soo dhigay Telegram. Waxaa intaa dheer, waxay sheegtay in baabuurta ay saaran yihiin haween iyo carruur, oo intooda badan aysan hadda haysan lacag cunto iyo biyo ah.
*Twitter-ku waxay dhawaan ku calaamadin doontaa qoraalada macluumaadka khaldan ee ku saabsan dagaalka Ukraine. Go’aanku waa qayb ka mid ah tilmaamaha cusub ee shaqada ee ka dhanka ah macluumaadka khaldan inta lagu jiro xiisadaha socda.
Qoraalada ku xad gudba xeerarka ayaa lagu qarin doonaa fariinta ay ku jiraan macluumaad marin habaabin ah oo keeni kara in dadka dhibaataysan ay khatar la kulmaan, ayay shirkaddu ku qortay boggeeda internetka.
* Midowga Yurub wuxuu baarayaa inay suurtagal tahay in la isticmaalo lacagaha laga xanibay Taajiriinta Ruushka si loo maalgeliyo dib u dhiska Ukraine, sida uu qoray Sky News.